पुरानै क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट फागुनमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ: पौडेल :: Setopati
पुरानै क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट फागुनमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ: पौडेल
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, भदौ १७
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कोरोना महामारीकै बीचमा पनि १४ औं महाधिवेशन गर्न सकिने गरी तीन वटा विकल्प अगाडि सारेका छन्।
यदि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न नसकिएको खण्डमा पुरानै क्रियाशील सदस्यताबाट नयाँ अधिवेशन गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ।
२०७२ सालमा भएको कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा चार लाख ८० हजार क्रियाशील सदस्य थिए। उनै क्रियाशील सदस्यबाट वडादेखि केन्द्रसम्म महाधिवेशन गराउन सकिने पौडेलको भनाइ छ।
कांग्रेसले फागुन ७ देखि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका निकालेको थियो।
जसअनुसार साउन मसान्तभित्र ७७ जिल्लामै नयाँ सदस्यता र नवीकरण वितरण गरिसक्ने कार्यतालिका थियो। तर आठ जिल्लामा समायोजनका काम नै सकिएको छैन। ती जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता फारम पनि पुगेका छैनन्।
पौडेलले अहिले कोरोना संक्रमित वृद्धि भइरहेकाले केहि दिन पर्खेर क्रियाशील सदस्यता वितरणका काम सक्नुपर्ने बताए।
उनले पहिलो विकल्पका रूपमा कात्तिकसम्म नयाँ क्रियाशील सदस्यताको काम सक्नुपर्ने बताएका हुन्।
दोस्रो विकल्पका रूपमा पौडेलले, यदि कोरोना संक्रमित बढिरहे भने १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यबाट वडादेखिका अधिवेशन गर्न सकिने बताए।
तेस्रो विकल्पका रूपमा पौडेलले १३ औं महाधिवेशनकै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने पनि बताए।
‘महाधिवेशन प्रतिनिधि अहिले छँदैछन्। उनीहरू नयाँ महाधिवेशन नभएसम्म क्रियाशील नै रहन्छन्। त्यसकारण पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट पनि नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन जसरी पनि गराउने इच्छाशक्ति हुने हो भने विकल्प छन्।’
सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रले बुधबार आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय नेता/कार्यकर्ता भर्चुअल अन्तर्क्रियामा बोल्दै पौडेलले फागुन ७ देखि नै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘यस्तै समस्या देखा पर्ला भनेर मैले तीन वर्ष अघि नै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर जाऔं भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘महासमिति बैठकमा पनि यो एजेन्डा प्रस्तुत गरेको हुँ। त्यसबेला साथीहरूले ध्यान दिनुभएन। हेर्नुस् को रहेछ दुरदर्शी अहिले थाहा भयो नि!’
आफूले प्रस्ताव गरेका बेला महाधिवेशन कार्यतालिका बनाएको भए यतिञ्जेलसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम सकिइसकेको हुने उनले बताए।
उनले पार्टी अधिवेशनमा ढिलाइ भए स्थानीय तह निर्वाचन तयारीमा धक्का पुग्ने र पार्टीका उम्मेदवार फेर पनि पराजित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए।
‘समयमै अधिवेशन सके पो मुखमा आएको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सकिन्छ। अरू चुनाव सामना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अधिवेशन फागुनबाट सार्नु आत्मघात हुन्छ। अधिवेशन जसरी पनि फागुनमै गर्नुपर्छ।’
‘फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न? देउवाको मनशाय के हो?: शशांक
सोहि कार्यक्रममा महामन्त्री शशांक कोइरालाले फागुनमा १४ औं महाधिवेशन हुने हो कि होइन भन्ने सुनिश्चितता नदेखिएको बताएका थिए। कोरोना महामारी र सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीले गर्दा फागुन ७ देखि तय गरिएको महाधिवेशन अन्यौलमा परेको कोइरालाले बताए।
‘पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेमा म छु। तर तोकिएको समयमै अधिवेशन हुन्छ कि हुन्न? कोरोना छ। अर्कोतर्फ सभापति देउवाको अधिवेशन गर्ने मनशाय छ कि छैन?’ उनले प्रश्न गरे।
फागुनमा महाधिवेशन नभए वैशाखमा गर्नुपर्ने उनले बताए।
सभापति देउवाको नियमित कार्यकाल गत वर्ष नै सकिएको हो।
अधिवेशनका लागि देउवाले विधानअनुसार एक वर्ष कार्यकाल थपेका थिए।
थप भएको कार्यकाल फागुन १९ मा सकिँदैछ।
‘पाँच वर्षभन्दा लामो समयसम्म अधिवेशन गर्न सकिएन भने वैधानिक रूपमा पार्टी संकटमा पर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘फागुन ७ मा अधिवेशन हुने सम्भावना देखिएन भने वैशाखमा त गर्नुपर्‍यो।’
महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको विचार राम्रो हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारले पराजय भोग्नुपरेको बताए। टिकट वितरण केन्द्रबाट भन्दा पनि अबदेखि जिल्ला सभापतिले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।